Danjiraha Britain Baugh oo la beddelay - BBC Somali - Warar
Danjiraha Britain Baugh oo la beddelay
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 7 June, 2013, 15:03 GMT 18:03 SGA
Furitaankii safaaradda UK ee Muqdisho
Xafiiska arrimaha dibadda iyo Commonwealth ee dalka Britain waxaa uu sheegay in laga bilaabo lixdii bishaan Juun 2013 danjiraha Boqortooyada Ingiriiska ee Soomaaliya uu yahay Neil Wigan oo beddelaya Mr Matt Baugh, oo loo dhiibi doono hawl kale oo Diplomacy-adeed.
Mr Wigan waxaa uu jagadiisa la wareegi doonaa bishan juun gudaheeda 2013. Mr Wigan waxaa uu ku biiray wasaaradda arrimaha dibadda iyo commonwealth sanadkii 2000 waxaana uu ka soo shaqeeyay waddammo dhowr ah oo dagaallo ay ka dhaceen, waxaana ugu dambeeyay isagoo ahaa danjiraha boqortooyada u fadhiya dalka Jamhuuriyadda Dimoqraaddiga ah ee Congo saddexdii sano ee la soo dhaafay.
Markii loo magaacabay danjiraha Boqoradda u fariisanaya dalka Soomaaliya, Mr Wigan waxaa uu yiri:
waan ku faraxsanahay kuna hanweynahay in la ii magacaabo waqtigan aadka muhiim ugu ah taariikhda Soomaaliya. Soomaaliya waxay sameysay horumar weyn ee xagga siyaasadda iyo ammaanka sannadihii ugu dambeeyay, iyadoo Al Shabaab laga saaray magaalooyin badan oo waaweyn, ayna xafiiska la wareegtay dowlad cusub oo sharci ah.
Dalka UK door weyn ayuu ka ciyaaray taageeridda horumarkan, lagu soo bandhigay shirkii Soomaalida ee London, ee wada jirka ay u guddoomiyeen Ra'iisal Wasaare David Cameron iyo madaxweyne Hassan Sheikh Mohamud. Dhibaatooyin badan ayaa harsan, waxaana aan rajeynayaa inaan ka shaqeeyo xallintooda. waxaan kaloo rajeynayaa inaan ku shaqeeyo xarunta safaaradda cusub ee Britain ka furatay magaalada Muqdisho, oo dib loo furay bishii April 2013 kaddib markii ay xirnayd 22 sano ah. ayuu hadalkiisa ku soo gebagebeeyay danjire Neil Wigan.